Nhau - Izvo zvakajairika mhando dzem switch dzinoshandiswa mukugadzira zvemagetsi
KW7 Micro Chinja
KW7N Micro Chinja
KW7F Mvura Inoratidza Micro switch
KW12 Micro Chinja
KW12 Dzvuku uye Dema
KW12F Mvura Inoratidza Micro switch
LZ15 Micro chinja
LZ5 Yakasimbiswa Limit Chinja
LZ7 Yakasimbiswa Limit Chinja
LZ8 Mini Limit Chinja
LHL Compact Limit Chinja
LWL General Limit Chinja
LF Tsoka Chinja
IPZ AC Simba Zvigadziko
PBS Push Bhatani Chinja
Mhando dzakajairika dzekushandura dzinoshandiswa pakugadzira zvemagetsi
Kana iwe uchifarira kutsvaga zvimwe nezve microswitches, iwe uri kurudyi peji. Muchikamu chino, isu tichaenda kutarisa mumhando dzakasiyana dze micro switch. Izvi zvinokubatsira iwe kusarudza yeyuniti yeyuniti kusangana nezvinodiwa zveprojekti. Ichi chinyorwa chinokupa iwe nzwisiso yakadzama mumhando nhanhatu dzemidziyo iyi. Ngationgororei ivo mumwe nemumwe. Verenga pamusoro kuti uwane zvimwe.
Akanyorwa pazasi ndiwo marudzi matanhatu eaya mayuniti. Kunyangwe zvese izvi zvine mabasa akafanana ekuita, pane musiyano pakati pezvakagadzirwa. Aya ndiwo mutsauko unovaita vakasiyana kubva kune mumwe nemumwe.
2. Push Button Swichi
3. Rocker Swichi
4. Michina Inoshandura
5. Slide Haizoshandisi
6. Toggle haizoshandisi
Micro switch ndidzo shanduko diki dzine lever kana Push bhatani. Aya mauniti haadi kushanda nesimba kwakawanda kuti ushande nemazvo. Sezvo izvi zvidiki kwazvo, zvakagadzirirwa kushandiswa kudiki kwemapurojekiti.
2) Push Button mhando
Aya mayuniti anogona kuwanikwa mune akawanda masitaera uye maumbirwo. Kunze kweizvi, mhando dzakasiyana dzezvinhu dzinoshandiswa kuzviita. Paunobaya bhatani, rinovhura kana kuvhara dunhu. Iwe unogona kusarudza kubva kune yechinguvana kana latching mhando. Iyo yekumberi inogara yakavhurwa kana kudzimwa chero bedzi iwe usingaipinze zvakare
3) Rocker mhando
Kana iwe ukadzvanya iyi mhando yekuchinja, ichazunza bhatani rechishandiso kuitira kuti uvhare vanofambidzana Saizvozvo, kana iwe ukazungunusa switch kune rimwe divi, ichavhura dunhu. Zvekare, izvi zvishandiso zvinowanikwa mumhando dzakasiyana uye masitayera. Semuenzaniso, unogona kuiwana mumatanho maviri: mbiri danda kana imwechete pole.
4) Rotary mhando
Seizvo zita rinoratidzira, iyi mhando yeyuniti inosanganisira kufambisa kusangana. Iwe unogona kufungidzira dial pane yekubika kuti unzwisise zvirinani mashandisiro emashandurirwo aya
5) Slide mhando
Slide switch dzinoratidza chidiki diki. Kana iwe uchida kuvhura kana kuvhara dunhu mukati mechigadzirwa, iwe unofanirwa kutsvedza iro muchiuno. Sezvo ari macompact mayuniti, panogona kuve nesarudzo yakanaka kumatunhu madiki emapurojekiti, kunyanya paunoda shanduko. Semuenzaniso, michina iyi inowanzo shandiswa munjanji kuchinja njanji dzechitima chiri kuuya.
Post nguva: Sep-05-2020
Zhejiang Lema Electrics Co, Ltd.
Push Button Micro Chinja, Magetsi Toggle Chinja, Toggle Chinja, Pushira Bhatani Footswitch, Micro Push Bhatani Micro Chinja Hapana Nc Pamwechete, Shandura Shandura Bhoot,